Ilaalada Madaxweynaha oo u badan reer Puntland iyo kuwa Maxamed Qanyare oo isku rasaaseeyay madaxtooyada Villa Soomaaliya, Qaar ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee dowladda oo doonaya in ay u dhaqmaan sidii kacaankii Siyaad Barre iyo Siyaasiyiin sare oo la taliya madaxweynaha oo kula taliyay in Cabdullahi Yuusuf ugu baaqo shacabka reer Muqdisho inuu uga hayo shaqo dekedda iyo hay'adda nabadsugiida. Ruunkinet 12/01/07
Waxaa goor dhaweyd rasaas xooggan isku dhaafsaday albaabka laga galo madaxtooyada Villa Soomaaliya maleeshiyaad ay isku hayb yihiin xildhibaan Maxamed Qanyare Afrax iyo kuwa ilaaliya madaweynaha Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf oo u badan reer Puntland in kastoo ay dadka qaarkiis sheegayaan in ay ilaalada madaxweynaha ay la socdeen taageerayaasha Xuseen Caydiid.
Dagaalkan dhex maray labada maleeshiya ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa iyo 5 ruux qaar kalana ay ku dhaawacmeen.
Arrintan ayaa dhacday kadib markii uu xildhibaan Qanyare looga yeeray in uu la kulmo madaxweyne Cabdullahi Yuusuf.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa madaxweynaha uu kullamo gooni gooni ah kula yeenanayay siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda beelaha USC.
Dhanka kale, waxaa dhawaan la soo saaray wareegto ay 7 ruux oo ka tirsan dowladda federaalka ah loogu magacaabay in ay noqdaan mas'uuliyiinta fuliya arrimaha deg deg ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Arrintan oo la sheegay in looga maarmayo shirar ay isugu yimaadaan xildhibaannada ama xukuumadda si ay uga arrinsadaan siyaasadda Soomaliya ayaa dad badan uga muuqataa in ay u egtahay xaaladdii kacaankii Siyaad Barre ee looga maarmay holaha wasiirada ayaamihiin ugu horeeyay ee Kacaankaasi.
Dhinaca kale, Warar ayaa soo baxaya oo sheegaya in siyaasiyiin ka tirsan taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf ay kula taliyeen madaxweynaha in uu u abuuro dadka reer Muqdisho shaqo gaar ahaan dekedda Muqdisho iyo xafiiska nabad sugidda.
Siyaasiyiintan ayaa la sheegay in ay ula jeedaan in ay Muqdisho ku sugan yihiin dad aad u badan oo ku wanaagsan howladaha dekedda iyo wargelinta arrimaha ay dowladda u bahan tahay ee ku aadan la shaqeynta mas'uuliyiinta sare ee dowladda si ay uga war bixiyaan xaalad kasta oo ka jirta gobolka Banaadir iyo goobo kale.